admin – Sthaniya Patra
नेपालमा गत माघ ९ गते पहिलो व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखियो । उनी सामान्य लक्षणमै निको भए । पहिलो संक्रमित देखिएको दुई महिनापछि मात्र दोस्रो संक्रमति भेटिइन् । यी दुवै विदेशवाट आएका थिए । यी दुवै जना कुनै स्वास्थ्य समस्या विनै निको भएका थिए…
कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोगशालामा १३ हजार ९८ वटा परीक्षण भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट भने ४८ हजार ५ सय २९…
१७ वैशाख, रौतहट । रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका ९ भुसहा र देवाही गोनाही नगरपालिका १ मा कोभिड १९ का थप दुई संक्रमित भेटिएपछि उनीहरुको सम्पर्कमा आएका ४६ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किएका भुसहाका २५…
२९ भदौ, काठमाडौं । मलेसियामा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरिएको छ । नेपाल र मलेसियाको श्रम मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिमा भएको सहमतिअनुसार १५ महिनादेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी खुला आइतबारबाट खुला भएको हो । अब…
केशव अबिरल गुल्मी : क्रान्तिकारी माओवादीले गुल्मीका पहिरो पिडितहरुलाई सहयोग गर्ने क्रम जारी राखेकोछ । साउन ६ गते परेको अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोबाट गुल्मी सत्यवती गाउपालिकाको ३ र ४ नं. वडामा विस्थापित भएकालाई क्रान्तिकारीले राहत बितरण…
परासी ९ फागुन । पश्चिम नवलपरासीमा ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम’ प्रभावकारी भएको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीको अगुवाइमा झण्डै चार महीनादेखि सञ्चालनमा रहेको ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम’ जिल्लामा प्रभावकारी…
भुताहा १७ माघ : पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट ९ भुताहामा रहेको राजामहात्मा पुर्णभद्र माविले बिद्यार्थीको ब्यवहारिक शिप विकासका लागि बृहत प्रर्दशनी विहीवार सम्पन्न गरेको छ । सैद्धान्तिक शिक्षाले मात्र जिवन उपयोगी नहुने तर्क गर्दै बिद्यालयले…
काठमाडौं । तामाङ समुदायले मनाउने सोनाम ल्होसार यो वर्ष माघ २१ र २२ गते मनाउने भएका छन् । यसको तयारीका लागि उनीहरुले आयोजक समिति निर्माण गरी अघि बढाएका छन् । काठमाडौं केन्द्रित केन्द्रीय कार्यक्रम टुँडिखेलमा दुई दिन सांस्कृतिक महोत्सवसहित…